နှမ်းထောင်းလေးနဲ့မုန့်လင်မယား | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
စကော့ဈေး ကြာဇံကြော် ဝက်သားတုတ်ထိုး အလွယ်လုပ်စားနည်း →
14 comments on “နှမ်းထောင်းလေးနဲ့မုန့်လင်မယား”
Lae Win Su
28/02/2012 @ 5:21 am
Lu Min Thaw
01/05/2012 @ 5:01 am
May i know how many cup of water? It is missing in the ingredients list.
01/05/2012 @ 8:14 pm
ရေက နဲနဲချင်းထဲ့ဖျော်ပြီး ကြွက်မြီးတန်းလောက်ရရင် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ 🙂
22/05/2012 @ 9:40 am
အရမ်းကြိုက်တယ် မရေ… ကြည့်ရင်းကို သရေကျလာတာ…
03/09/2012 @ 5:59 am
အမရေ… ပိတ်ရက်တုန်းက အမပြောတဲ့ အချိုးအတိုင်းလုပ်စားဖြစ်တယ်… အိုးကတော့ cupcake အိုး အသေးလေးနဲ့ လုပ်တာ.. မုန့်သားက သိပ်မကျက်ချင်ဘူး၊ ပြီးတော့ အောက်ကလည်း အမလို နီပြီးမကြွပ်ဘူး.. မဲမဲလေးပဲ ဖြစ်သွားတယ်… အမလုပ်ထားတာလေးက ကြွပ်ကြွပ်လေးနော်… နောက်တခါ ထပ်လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်.. ဆီများနည်းလို့လားမသိဘူးနော်..
03/09/2012 @ 10:48 pm
အိုးကဆီဝမှကောင်းတာညီမရေ ထပ်လုပ်ကြည့်ပါအုန်းနော် 🙂
Hnin Lai Wai Oo
23/12/2013 @ 9:20 am
အမရေ… အိုးကို singapore မှာဘယ်နားကဝယ်လဲဆိုတာ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အစ်မကိုမေးပေးလို့ ရရင် မေးပေးပါလားနော်… သမီး အိုးလိုက်ရှာနေတာကြာပြီ တွေ့သေးဘူးဖြစ်နေလို့ နော် ကျေးဇူးပါမမ. မမရဲ့ ချက်နည်းလေးတွေအမြဲအားပေးလျက်ပါ… ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်ရင်လဲ ဒီကပဲကြည့်ရတာ 🙂
24/12/2013 @ 1:25 am
hote may payy mae naw 🙂
30/01/2014 @ 12:06 am
sis yay, mustafa mhar tae . sorry for late reply 🙂
04/03/2014 @ 2:57 am
မရေ လူ၁၀ယောက်စာလောက်ဆို ဆန်မှုန့်၊ ကောက်ညင်းမှုန့်၊ပဲမှုန့် ဘယ်လောက်လိုလဲဟင်။ အချိုးလေးပြောပြပါ။
05/03/2014 @ 1:34 am
make it5times of this ratio naw nyi ma lay 🙂
I have only egg poacher pot. Can I use that one instead of proper molinmayar pan as can’t find that pot.